Galmudug oo Si adag uga jawaabtay hadalkii kasoo baxay Puntland Fariina u dirtay Beesha Caalamka | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Galmudug oo Si adag uga jawaabtay hadalkii kasoo baxay Puntland Fariina u dirtay Beesha Caalamka
Maamulka Galmudug ayaa goordhaw War-Saxaafadeed kasoo saaray dagaal qasaaro dhaliyay oo saakay magaalada Gaalkacyo ku dhax maray Ciidamada Galmudug iyo kuwa Maamulka Puntiland.
War-Saxaafadeedka Galmudug kasoo baxay ayaa looga jawaabay hadal manata kas baxay maamulka Puntland oo ahaa in dagaalkii saakay ay qeyb ka ahaayeen Kooxda Al-Shabaab oo garabsiineysa dhinaca Maamulka Galmudug.
War-Saxaafadeedka kasoo baxay Galmudug ayaa u qornaa sida tan:
Waxaa maanta ka dhacay magaalada Gaalkacyo dagaal u dhaxeeyay Ciidamada Dowlad- Goboleedka Galmudug iyo kuwa Puntland kadib markii ay dhismo ka bilaabeen dhul aan dhismo loogu talo gelin oo murano ka jireen iyaga oo howlgalkooda ka bilaabay rasaas ay soo fureen, ciidamada Galmudugna halkaas ayay difaac iyo iska cabin ka bilaabeen.
Waxaa kale oo nasiib darro ah in Puntland ku sheegtay war-saxaafadeedka ay soo saartay in duulaanku uu ah mid aargoosi ah oo looga jawaabayo dagaalki jeexdin, taas oo aan u aragno in ay Puntland ugu saantirayso weerarka ay soo qaaday waxayna caddayn u tahay waxa xumaatada ah ee ka buuxa qalbiyada maamulka Puntland. Halka Galmudug ay ka go’antahay ku shaqaynta mabaadiiada nabad-ku-wada noolaasho dhexe marata laba shacab iyo labada maamul sida aan horayba ugu baaqnay marar badan.